बाह्रथरी कुरा – Page9– १२-२७ कुराले बङगारा झार्ने थलो
अनि ति समातिएका डाउटर प्रति सहानुभूति राख्नेहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने गरेका आलुपाँडे तर्कहरु पढौँ आउनुस्। Continue reading →
Posted on June 21, 2016 by Charlie	2
१२ थरी ब्युरो राजनीतिक टिप्पणि गर्न त्यति धेरै रुची राख्दैन। यसो भन्दाभन्दै पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै समाजमा रहेका विभिन्न प्रवृत्ति र विकृत्तिका बारे औंला उठाउने र त्यो प्रवृत्ति र विकृत्तिको केन्द्रविन्दुमा रहेका पात्रहरुको बंगारा झार्ने हो। त्यसैले पनि राजनीतिक टिप्पणि गर्दिनँ भन्नु भनेको हामी यी प्रवृत्तिका बारे मौन रहनु ठहरिने भएकोले पनि राजनीतिक टिप्पणि आवश्यक देखियो। राजनीतिक टिप्पणिका लागि अहिलेको उपयुक्त बिषयका रुपमा ‘नयाँ शक्ति’ अगाडि देखापरेको छ। ‘नयाँ शक्ति’ लाई केही व्यक्तिहरुले देशको कायापलट गर्ने एकमात्र अचुक औषधि ठानेका छन्, र, तिनीहरुले के बिर्सेका छन् भने नयाँ शक्ति भनेको बाबुराम भट्टराईको महत्वकांक्षा मात्र हो, जुन महत्वकांक्षाले उनलाई २०५२ सालदेखि छोडेकै छैन।आउनुस्, आज बाबुरामको नयाँ शक्तिका बारे चर्चा गरौं। Continue reading →
Posted on June 20, 2016 by Boston	1
आज हामी दोस्रोपटक हाम्रो बारेमा लेख्दै छौं। पहिले लेखेको छुटाउनु भएको भए यँहा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी मध्ये एकादुई सामन्ती परिवारबाट आए पनि बाँकी धेरै जस्तो मध्यम वर्गीय परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दछौं। हाम्रा टिप्पणीकार इको बाहेक हामी सबैले सरकारी स्कुल पढेका हौँ। हामीले हाम्रो बेलाको एसएलसीको सम्झना नि लेखिसकेका छौं। छुटाउनुभएको भए यँहा हेर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षा दिएपछि रिजल्ट आउँछ। त्यसको सम्झना नि त लेख्नुपर्यो नि हैन त ? ल आउनुस् पाठकबृन्द, हाम्रा टिप्पणीकारहरुको रिजल्ट अनुभव सुन्न फुलपाती लिएर तयार हुनुस्। पुनश्च: यी सम्झना सबैले आफैले लेखेको भएकाले लेखमा एकरुपता नदेखिन सक्छ।सबैको सम्झनापछाडि सम्पादकको टिप्पणि राखिएको छ। Continue reading →
Posted on June 16, 2016 by Ghost Writer	0
Posted on June 6, 2016 by Ghost Writer	0
यो रचनाको प्रारुप तयार पारिदाँ त्यो ट्विटर नाम गरेको सामाजिक सन्जालका प्रयोगकर्तालाई बढी लक्षित गरिएको थियो। अब तपाइँहरु त हाम्रा गोजीका मान्छे पर्नुभो, तपाइँहरुलाई के लुकाउनु ? साँच्चो कुरो भन्दा, आजकाल नेपालमा हरेक ट्विटर प्रयोगकर्तासित एउटा @ncell को सिम हुन्छ रे, किन भने त्यो सिमबाट फिरिमा ट्विटर चलाउन पाइन्छ। तर के गर्नु त्यो सिमले फिरिमा @12Thari चाहिँ हेर्न मिल्दैन। त्यसैले कतिपय लेखहरु कपि पेस्ट गरेर डिएममा नि बाँडिएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ। अब आउनुस् त्यसैगरी लेख रचना डिएममा माग्ने लगायतका तालतालका सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताहरुको बारेमा केही गन्थन गरौँ। कसैको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आओस् भनेर यो लेखिएको होइन, त्यसैले कृपया यो पढेर हाँस्नुहोला। पुरै भावनामा बगेर नरिसाउनु होला। रिसाउनु नै भयो भने पनि तपाइँकै मुख कालो हुन्छ, तपाइँले नै फेयर एन्ड हेन्सम वा फेयर एन्ड लभ्ली दल्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो त के छ र ! Continue reading →
Posted on June 3, 2016 by Echo	2
डिजिटल डिक्सनेरी, परियो तिरिमिरी
आधुनिकता सँगसँगै धेरै कुरा साना र छोटा हुँदै गइरहेका छन् । चाहे त्यो युवतीहरूले लगाउने पहिरन होस् , चाहे आजकालको युवापुस्ताले प्रयोग गर्ने संवाद। आमालाई ममी हुँदै मम्, बुवालाई ड्याडी हुँदै ड्याड र दाजु/भाइलाई ब्रोदर हुँदै ब्रो !
१२ थरी टिमका एक जना टिप्पणीकार एकदिन मर्निङ वाकमा जाँदा एक जना साथीले वहाँलाई कुनै युवतीले मोबाइलमा लेखेको संवाद देखाएछन् । TTYL लेखेको कुरो नबुझेर उनी बिलखबन्दमा परेका रहेछन् । अधबैंसे उनी फेसबुकमा छिरेर क्याम्पस् पढ्ने षोडशीहरुलाई घाँस हाल्न माहिर रहेछन् । तर कुरा गर्दा गर्दै अचानक केटीले Talk To You Later को सर्ट फर्म TTYL लेख्दा Tero Tauko You Liar लेखेकी हो कि, पातकी बुढो पो भन्या हो कि, वा ‘पख मेडमलाई भन्दिन्छु’ पो भनि कि भनेर अधैर्य पो भएका रहेछन्। टिप्पणीकार जर्जले त्यति कुरो बुझाउँदा उनलाई बुद्धत्व प्राप्त भए झैं भएछ, टाउकोबाट पहाडै हटाए झैं आनन्द आएछ। त्यही मर्निङ वाक गुरुपमा यो कुरा चर्चा हुँदा त प्राय: सबैलाई यही समस्या रेहको बुझियो। र, १२ थरीको सोसियल रेपस्पोन्सिबिलिटी अभियान अन्तर्गत हाल सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने स्ल्याङ, एक्रोनिम (सटकट् क्या ! ) र नानाभाँति इमोजीको बारेमा यहाँ चर्चा गरिँदैछ ।
Posted on May 27, 2016 by Golf	0
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि एकपछि अर्को घोषणा गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नहुँदै पनि आफ्ना भाषणमा उखान टुक्का जोडेर कमेडी गर्ने ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि त एकपछि अर्को धमाका दिइरहेका छन्। उता भिडियो साइट युट्युबका पश्चिम अमेरिकाका तर युकेमा बसोबास गरिरहेका एकजना १९ वर्षिय युवक छन्- मेक्सिम बडी नामबाट युट्युबमा च्यानल चलाउँछन्। उनलाई वयश्क कमेडियन भनिन्छ। इन्टरनेटमा भेटिने रमाइला, अनौठा, वाहियात यस्तै यस्तै अनेक भिडियोमा उनले कमेन्ट गर्छन्। उनको अंग्रेजी लवज र उनको अनुहारको हाउभाउका लागि उनी प्रख्यात मानिन्छन्। १२ थरीको अडियो भिडियो ब्युरोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका घोषणामा उनै चर्चित मेक्सिम बडीको प्रतिक्रिया मिलाएर एउटा भिडियो बनाएको छ। Continue reading →
Posted on May 26, 2016 by Boston	0